Caawiyaha Hoyga Google wuxuu helaa tilmaamo cusub! - Kuhadal Google Mini Mini oo kuhadl Polish - SmartMe
Kaaliyaha Google wuxuu leeyahay astaamo cusub!
9 Janaayo 2020
kaaliyaha codka, Kaaliyaha Google, google
Caawiyaha Google wuxuu u dabaaldegi karaa guusha. Waxaa durba laga heli karaa 90 waddan waxaana isticmaala dad ka badan 500 milyan oo qof. Waxay sidoo kale ka shaqaysaa Polish. Mid ka mid ah qodobada guusha ee kiiskan waa horumarka joogtada ah ee kaaliyaha. CES sanadkaan, Google ayaa meel sarre ka dhigtay oo shaacisay astaamo aad u xiiso badan. Baro inbadan oo ku saabsan sida ay u wanaajin karaan howlgalka aaladda.
Midkooda ugu horeeya ayaa noqon doona ogaanshaha tooska ah ee alaabada aan ku dari karno Google Home - shaqadan waxaa sidoo kale taageeraya nooca Polish-ka. Marka isticmaaleygu dejiyo badeecad cusub oo ku jirta arjiga Android, ka dibna wuxuu si otomaatig ah u heli doonaa macluumaad ku saabsan suurtagalnimada inuu ku xiro Google Home. Badhan sidan oo kale ah ayaa waliba ka dhex muuqan doona barnaamijka 'Google Home app'.
Muuqaal kale oo cusub ayaa ah qoraalada dhejiska ah ee laga heli karo Kaaliyaha Google. Shaashadaha smart, waxaan hadda awood u yeelan doonnaa inaan abuurno kaararka macluumaadka oo aan la wadaagno qoyska sida qayb ka ah codsiga. Waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan u sheegno kaaliyaha waxa aan ku qorno kaarka annaga.
Shaqada ku xigta waa "Ficillada Qorsheysan". Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan u sheegno Google inuu soo rogo qalabyada qaarkood, aaladda qaarkood waqti go'an. Tusaale ahaan, qaxwe sameeye lixdii aroornimo iyo huur-sideed sideed. Dabcan, qalabka waa inuu noqdaa mid la jaan qaadi kara Google Home.
Caawiyehee kumbuyuutarkee ayaa ugu waxtar badan?
Alexa, Amazon Alexa, Kaaliyaha Google, Suuriya
Dad badan oo xiiseeya tiknoolajiyada casriga ah ayaa laga yaabaa inay la yaabeen kaaliyaha dalwaddii ee ugu waxtar badan Natiijooyinka cilmi baarista ee Bespoken waxay qancinayaan xiisahaas ilaa xad. Shirkadda aan soo sheegnay ee Bespoken ayaa caan ku ah sameynta cilmi baaris loogu talagalay la socodka ...
Hal-abuurnimo kale ayaa ah awoodda si buuxda loogu akhriyo maqaalka oo dhan, sida kan oo kale. Kaliya dheh "Hey Google, akhri" ama "Hey Google, akhri boggan" kaaliyaha ayaa wax walba kuu akhrin doona! Hawsha waxaa loo heli doonaa 42 luqadood, oo uu ku jiro afkeenna hooyo ee Polish!
Kaaliyaha Google wuxuu sidoo kale awoodi doonaa inuu tirtiro macluumaadka aan si kadis ah u siinay. Haddii aan si shil ah u dhahno "Ok Google" waxaan dhihi karnaa "Hey Google, taasi wasi't for you". Natiijo ahaan, Google way ilaawi doontaa wax walba oo aan u sheegnay. Ikhtiyaarka waa la ballaarin doonaa, maxaa yeelay waxaan sidoo kale ka dalban karnaa kaaliyaha inuu tirtiro wax kasta oo aan ku iri asbuucaan "Haye Google, tirtir wax walba oo aan kugu iri toddobaadkan".
Sidaad arki karto, waxaa jira xulashooyin badan oo waa wax weyn in Google uu horumariyo kaaliyihiisa si aad ah.
Isha iyo sawirrada: Google Blog
Sawir ka yimid Mitchell Luo na Aadaabta
Sidaad arki karto, howlaha cusub ee laga heli karo Kaaliyaha Google, oo sidoo kale lagu daro Google Home, waxay si weyn u ballaarinayaan suurtagalnimada barnaamijkan. Waad ku mahadsan tahay, hawlgalka aaladda iyo howlaha kala duwan ee internetka ayaa sifiican waxtar u leh. Iyada oo ay ugu wacan tahay helitaanka luqadda Polish-ka, softiweerka ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa waddankeenna.
Hoyga Google - waa inay dhacday
Google muddo dheer ayey ka joogsatay inay xidhiidh la samayso uun mashiinnada raadinta. Astaanta waxay siisaa dadka isticmaala daraasiin xalal ah, si joogto ah u maalgashadeysa cilmi baarista, horumarka iyo bilaabida balan qaadyada. Way sii adkaanaysaa in la helo aag ay xarun ku leedahay Mountain View, California malahan wax dalab ah ama aalado. Kaaliyaha Google waa hal tusaale oo keliya.
Tan iyo markii fikradda guryaha caqliga leh ay heshay dhul beereed, waxay ahayd waqti uun kahor intaan alaabooyinka ugu dambeeya ee loo yaqaan Google Home iyo Google Home Mini ay ka soo muuqan suuqa. Lama dafiri karo in inbadan oo kamid ah muwaadiniinta wadankeena, si kastaba ha noqotee, aaladahaan wali qarsoon. Ma mudan tahay in la beddelo? Iyadoo aan loo eegin qiimeynta ugu dambeysa ee aan siinno waxqabadka guud ee aaladda, waa inaad marka hore ogaataa sida ay u shaqeyso, waxa ay tahay iyo waxa suurtagal ah ee ay bixiso. Qiimaha soo jiidashada leh (la filayo) nooca Polish iyo nashqadeynta xiisaha lihi waxay fursad siinayaan xalkaan.
Waa maxay kaaliyaha Google Home
Ka hor inta kooxda Mareykanku ay bilaabin inay horumariyaan taxanaha Nest (Mini, Hub, Max), dhamaadka 2016, kuwa ku hadla guryaha bilaa Google waxay leeyihiin muuqaalkooda ugu horreeya. Waxaa lagu gartaa qaab cylindrical ah iyo nooca aasaasiga ah ayaa hoos u dhigay, midab cad iyo cawlan. Si aad u shiddo ama u aamusnaato isticmaal xariif ah, badhamada taabashada. Bilowga, waxaad go'aansan kartaa inaad ku beddesho dahaadhka moodooyinka sheyga iyo biraha ee midabbooyinka ku habboon gudaha gudaha.
In ka yar sanad kadib, nooc yar oo qalab ah oo shaqadiisa la mid ah ayaa suuqa ku dhacay. Google Home Mini waa si fudud u hadla yar, marka loo eego xagga naqshadeynta, tusaale ahaan, ... dhagax. Marka la barbardhigo kan ugu horreeya, ee kala duwanaanta weyn, faahfaahinta qaar ee ku saabsan hannaanka gacanta ayaa la beddelay oo dib loo cusbooneysiiyay
In 2017, moodelka ugu weyn ee loo yaqaan Google Home Max wuxuu sidoo kale ka muuqday suuqa, oo leh khudbado istcimaalo ah, nooca nooca USB smart C. Laga soo bilaabo 2019, shirkadda Mareykanka ayaa bilaabay inay horumariso tikniyoolajiyadeeda iyada oo qayb ka ah sumadda Nest.
Waxqabadka Google Home iyo codsiyada
Nidaamka loogu yeero kaaliyaha Google wuxuu ku saleysan yahay amarrada codka. Taasi waa sababta guud ahaan ee loo dalbo Google Home ama Google Home Mini-ka gurigiisa ku hadla ee wireless-ka ah in la isticmaalo makarafoonadooda ay ku dhisan yihiin.
Ogeysiis muhiim ah oo kusaabsan luuqada Polishka. Sida aan ku tilmaamnay qoraalka, nooca Polish-ka ee wax aqrintu waa mid ka mid ah hal-ku-dhegyada hubaal ee caddaynaya waxtar. Dhibaatadu waxay tahay in aaladda aan wali si buuxda loo soo bandhigin oo aan looga hirgelin suuqeena. Luuqada Polishka waxay kicisaa khilaafaadyo badan iyo shaki. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha Google Home Mini, oo caadeystay inay ku xakameeyaan amarrada Ingiriisiga, ayaa la yaabi kara markii qalabku ka jawaabo ereyada Polishka ama ... waxay ku jawaabtay iyadoo la adeegsanayo ereyadeenna. Arrintu way adag tahay, laakiin waxaan u qaadan karnaa in muddo ka dib, iyada oo la adeegsanayo faafitaanka tiknoolajiyadda casriga ah, dhammaan codsiyada Google waxaa lagu heli doonaa luuqadda Polishka iyada oo aan wax xaddidaad ah ama dhibaato ah la helin.
Tusaale codsi oo ah kaaliyaha Google ee kuxiran gacanta guriga Google gabi ahaanba waa xakameynta codka iftiinka. Isticmaalayaasha guryaha hoyga ah ee casriga ah waxay badanaa ku bilowdaan dhinacyada nolosha ee nolol maalmeedka sida kuwa fog, kuwa tooska ah ama si fudud si dhakhso leh u maareeya. Farriin cod ah - eray sir ah - ayaa ku filan in la damiyo ama la demiyo hal ama in kabadan ilaha iftiinka iyada oo aan loo eegin in ay tahay habeenbadhkii, gacmahaagu mashquul yihiin ama hadda uun soo galaan guriga ka dib mugdiga.
Yaanan iloobin in Google Home ay yihiin kuwa ku hadla oo ay mudan tahay in la isticmaalo shaqooyinkooda aasaasiga ah. Maaddaama ay helayaan amarradeenna shakhsi ahaaneed, waxay isticmaali karaan lambar sir ah si ay ugu dhaqaajiyaan raadiyaha internetka ee ay jecel yihiin TuneIn ama qalab gaar ah oo laga heli karo Spotify. Maareynta warbaahinta codka ayaa ka baxsan kaliya muusigga la ciyaaro. Taladayada ayaa laga yaabaa inay khuseeyaan chromecasts, YouTube, TV-yada Android ama xitaa qalabka ciyaaraha ee Xbox.
Doodda "haa" waa raaxo mar labaad. Mararka qaarkood gabay "maskaxdeena ku soo dhaca" iyo xasilloonida aamusnaanta kuma filna - waxaan rabnaa inaan isla markiiba dhagaysanno. Hadda kaliya geli cinwaanka iyo amar ku habboon. Way adag tahay in lagu caajiso kaaliyaha Google.
In kasta oo la'aanta taageerada buuxda ee lagula xidhiidho kaaliyaha Google ee afka Polish laga yaabo inay dhibayso, aqoonta Ingiriisiga waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud cod ugu hesho macluumaad badan oo la taaban karo oo cod ah. Waa maxay cimiladu Waqtigee ayuu furan yahay dukaanada ku dhow dhow? Macluumaadka Google aruurinta iyo socodsiinta ayaa loo kala diri karaa iyadoo la adeegsanayo amar, iyadoo aan laga raadin taleefan ama kombiyuutar. Xusuusiyuhu wuxuu leeyahay faa'iidooyin la mid ah - halkii aad iyaga laftiisa gacanta ku dhigi lahayd, waxa kaliya ee aad sameyn laheyd waa "amar" iyo Guriga ama Guri Yar ayaa xukuma waqtiga, tusaale ahaan karinta.
Mawduuca maqaalka, yacni shaqooyinka xiga ee aaladda laga wada hadlay, waxay soo jeedineysaa hal dheef oo dheeri ah. Hagaag, isticmaale kasta oo ku hadla - Kaaliyaha Guriga ee Google wuxuu barnaamij ka dhigan karaa amarro la xiriira in ka badan hal waxqabad. Tusaale ahaan: hal lambar oo sir ah ayaa shidaa laydhadhka iyo telefishanka, maxaa yeelay waa tan aannu caado u leenahay inaan guriga galno. Dhawaaqyo xiiso leh? La socodsii haddii aan diyaarinayno agab dheeri ah oo ku saabsan Google Home (waxaan rajeyneynaa nooca Polish-ka ah inuu ugu dambeyn suuqa ka muuqan doono!)
Ma jeceshahay maqaalkeena? Nalaso fahankeena Facebook!
Waxaad xiisaynaysaa mawduucyada Guryaha smart? Ku soo biir annaga Kooxaha Facebook!
Waxaad haysaa wax su'aalo ah oo ku saabsan Xiaomi? Jawaabo raadinta annaga noo hel Kooxda Facebook!
Oo haddii, marka laga reebo akhrinta ku saabsan teknolojiyada, aad jeceshahay inaad fiiriso, ka dib waxaan kugu martiqaadeynaa astaanteena Instagram!
Kaaliyaha Google oo leh horumarin dheeraad ah
Kaaliyaha Google, google, kaaliye google
Google waxay si joogto ah u wanaajinaysaa kaaliyeheeda dalwaddii waxayna ku dareysaa astaamo cusub si loo kordhiyo isticmaalkeeda. Kaaliyaha Google wuxuu heli doonaa cusbooneysiin si looga caawiyo qoysaska nolol maalmeedkooda. Kaaliyaha Google wuxuu durba leeyahay muuqaal la yiraahdo Broadcast oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ...
Lacagaha Google Pay waxay heli doonaan warar badan
google, mushaharka google, lacag bixinta
Lacag bixinta la adeegsado Google Pay waxay xitaa caan ku noqon doontaa mustaqbalka dhow. Shirkadda ka socota Mountain View waxay go'aansatay inay abuurto qaab kale oo astaamo xiiso leh. Eeg waxa isbeddelaya. Google Pay ayaa sii socota ilaa ...
Kaaliyaha Google, google
Kaaliyaha Google wuxuu noqdaa mid faa iido badan leh, qaasatan markay tahay xakamaynta aaladaha guryaha casriga ah. Cusbooneysiintii ugu dambeysay ayaa ah in fariimaha la daabacay laga dhigo kuwo xitaa sifiican u tarjumay isaga. Kaaliyaha codka ee Google ma fiicna, si kastaba ha noqotee ...
Kulamada Google Meet: kaqeybgal badan, kullan loo dhan yahay oo wax soo saar leh
google, google kulmaan
Sanadkii la soo dhaafay, shirarka macquulka ah waxay ahaayeen qodob muhiim u ah isbeddelka adduunka ee shaqada. Ka hor faafida, waxay door muhiim ah ka ciyaareen kaliya kooxaha kala firdhay, maanta waxay awood u siinayaan inay sidoo kale u shaqeeyaan kooxahaas iyo ururadii markii horeba jir ahaan ku jiray ...
Apple wuxuu iibiyay kuhadallo badan oo Google ah Q1 2021
tufaaxa, google, hadal caqli badan
Shirkadda falanqeeye ee Omdia ayaa sameysay cilmi baaris ay ku ogaatay in Apple ay ka iibisay ku hadla ka caqli badan Google rubucii hore ee 2021 Waxay soo baxday, si kastaba ha noqotee, in faa'iidadan ay noqon karto mid muddo-gaaban ah. Tirakoobyadu waxay muujinayaan in saddexda bilood ee ugu horreeya hadda ...
Kaaliyaha Google ayaa kaa caawin doona inaad hesho taleefankaaga
Kaaliyaha Google, guriga google, buul google
Aaladda cusub ee Kaaliyaha Google ayaa ka caawin doonta dadka jahawareersan inay helaan taleefan casri ah oo lumay. Si xiiso leh, waxay faa'iido u yeelan doontaa xitaa taleefannada ku shaqeeya nidaamka hawlgalka ee iOS. Kaaliyaha Google ayaa kaa caawin doona inaad hesho taleefan lumay Kaaliyaha Google wuxuu ku kasbaday ...
Google Pixel Watch waxay umuuqataa martiqaad. Waan ognahay taariikhda la siidaayo
google, google pixel watch, Ciyaar
Google ayaa horey u diyaarisay saacadihi ugu horeeyay oo la sii deyn doono todobaadyada soo socda. Dareer ayaa horey uga soo muuqday kanaalka hore ee Tiknoolajiyadda kanaalka 'YouTube', oo muujinaya labadaba muuqaalka Google Pixel Watch iyo ...
Abka Google oo leh sumadaha asturnaanta
Google waxay daabacday sumadaha asturnaanta ee barnaamijyadooda ugu caansan ee App Store. Eeg waxa isbeddelay iyo waxa la xusuusto marka hore. Dib u dhac ku yimaad dhinaca Google Barnaamijyada qaarkood sida Sawirrada, ...
Ku dheji khadadka baabuurta cusub ee 500 Hey Google
Kaaliyaha Google, fiat, fiat 500 hey google, gawaarida
Shirkadda soo saarta baabuurta ee Talyaani Fiat ayaa hadda ku dhawaaqday iskaashi ay la yeelatay shirkadda teknoolojiyadda ee Google Natiijadu waa khad gaar ah oo ah 500 Hey Google oo leh 500, 500L iyo 500X moodel. Shirkadaha teknolojiyadda ayaa soo bandhigayay xalkooda muddo dheer ...